Jaarsoliin Biyyaa Sidaamaa fi Ijjetoon Naannoo Ofii Uummachuuf Murteessan
Adoolessa 15, 2019
Marii sa’aatilee dheeraaf erga geggeessanii booda alaabaa mootummaa biyyoolessaa sidamaa ta’a kan ittiin jedhan magaalaa Hawaasaa keessatti sirna Gudmalee sooressaa soongoo jedhamuun waliin ta’un fannisaniiru.
Ejjettoo fi jaarsoliin qooda gama isaanii xumurniiru waan ta’uuf Sidaamaan naannoo akka ta’e labsaniiru, inni hafe kan mootummaa ti jedhan.
Kaleessa guyyaa guutuu jala bultii hundeeffama naanoo sidaamaa ajandaa jedhu irratti falmii fi marii magaalaa sa’aatilee dheeraaf geggeessaniiru.
Mootummaa uummata Sidaamaa hundeessuuf haaldureen xumuramuu isaatti aansee dargaggoonnii fi jaarsolii hedduun bakka argamanitti ture mariin sun geggeessameera kan jedhame.
Akka sirna aadaa Afiinii jedhamutti kan mari’ateef mariin muddamaan guutame kun walii galtee irra ga’uu dhaan ibsa ejjenoo baasee jira.
Bu’uurri marii sanaas bulchiinsa ofiin of bulchu labsuu fi alaabaa naannoo fannisuu ykn murtii fi kallattii mootummaan kaa’u eeguu kan jedhu ture.
Bakka bu’aa jaarsolii kan ta’an obbo Ayyelee Booruu naannoo keenya uummachuu dhimma jedhu irratti mootummaa waliin mari’ataa turre. Yeroo dheeraas eegnee jirra. Garuu deebii hin arganne. Kanaaf guyyaan seeraan kenname waan dhumateef dargaggoota waliin mari’annee, naannoo ofii keenyaa labsine jedhan.
Gaaffiin Sidaamaan naannoon of ijaaruu Adoolessa 11 bara 2011 akka hin dabarre murtaa’eeaa jedhu dargaggoonni irratti hirmaatan.
Bal’inaan ibsuu baatanis sirna federaalaatti kanneen hin amanne qabsoo keenyatti hiika addaa kennuuf yaalaniiru, garuu akkuma kana duraa sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa waliin tokkummaan itti fufna jedhan. Alaabaan kun mootummaa ykn mana maree sidaamaatiin kan eeyamame utuu hin taane jaarsolii fi dargaggoonni sidaamaa gama aadaabn kan fannisanb yoo ta’u manni maree sidaamaa fedhii jaarsolii irratti hunda’ee murtii dabarsa jedhamee eegama jedhaniiru.